News desk – Page 30 – News Dainik
७ चैत्र २०७७, शनिबार ०७:४३ उर्जा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक विस्तारलगायतका कारणले आज राजधानी काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बिजुली कटौती हुने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बानेश्वर वितरण केन्द्रले कोटेश्वर महादेव मन्दिर, कोटेश्वर चोक, जडीबुटीचोकबाट मनोहरा महादेव मन्दिर हुँदै लालीगुराँस स्कुल, सीसीआरसी कलेज, सूर्यकोट गेटसम्मको स्थानमा बिजुली कटौती हुने जनाएको छ । बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म बिजुली कटौती हुने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ । सडक विस्तारका लागि ११ केभी भूमिगत तार राख्ने कार्यका …
३ दिनको पूर्वानुमानः पहाडी भेगमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
७ चैत्र २०७७, शनिबार ०७:२५ समाचार
काठमाडाैँ । अहिले देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको समेत प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ । आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा साथै प्रदेश नं २ का एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति प्रदेश नं …
घट्यो सुन-चाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ११:५३ आर्थीक
काठमाडाैँ । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य आज घटेको छ । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८६ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै, तेजाबी सुन प्रतितोला ८६ हजार २५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । आज नेपाली बजारमा चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । …
सिँगटी हाइड्रोको २६ लाख ९७ हजार कित्ता आईपीओ जारी
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ११:४८ आर्थीक
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि शुक्रबारबाट साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गरेको छ । कम्पनीले रु. १०० अंकित दरका २६ लाख ९७ हजार कित्ता आइपिओ जारी गरेको हो । यस मध्ये १ लाख ४५ हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि र ५८ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको छ । बाँकी सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन गर्न पाउने छन् । सर्वसाधारणले कम्तीमा १० कित्ता र बढीमा २ लाख …
नवीन्द्रराज जोशीको उपचारमा सरकारले १० लाख सहयोग गर्ने
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ११:४१ समाचार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको उपचारमा सरकारले १० लाख सहयोग गर्ने भएको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जोशीको उपचारमा १० लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय हो । आज बिहान उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचाररत जोशीको स्थ्य अवस्था बुझ्दै परिवारका सदस्यहरुलाई यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले बिहान साढे ९ बजे जोशीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा जानकारी लिएका थिए । त्यसक्रममा पोखरेललाई …
स्कुटर दुर्घटनामा ‘जीवन’को ज्यान गयो
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ११:०२ समाचार
कावासोती । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीमा बिहीबार राति स्कुटर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मत्यु भएको छ । खरकट्टा जङ्गलमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा कावासोती नगरपालिका-२ का ३५ वर्षीय जीवन राना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले बताए । जङ्गलमा लु५८प ७०४८ नंको स्कुटर र चालक लडिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा घटनास्थल पुगेको प्रहरीले रानालाई राति नै …
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार १०:०० उर्जा
काठमाडौं । काठमाडौंको महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रहरुमा शुक्रबार विजुली काटिने भएको छ । महाराजगञ्ज, कपनमार्ग, मण्डिखाटार, रुद्रमती, फाट, गोल्फुटारलगायत ठाउँमा आज तीन घण्टा बत्ती जाने भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रको बाँसबारी फिडरअन्तर्गत पर्ने गङ्गालाल हस्पिटलदेखि गोल्फुटार क्षेत्रमा ११ मिटर पोल गाड्ने कामका लागि दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म लाइन काटेर काम गर्न लागिएको प्राधिकरणले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराएको छ । यस्तै आज प्रदेश-२ …
ईयूको औषधी नियामकले भन्यो- आस्ट्राजेनेका खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छ
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०८:५३ विदेश
काठमाडाैँ । युरोपेली सङ्घ ईयूको औषधी नियामक ईएमएले गरेको एउटा समीक्षाले अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेका कोभिड खोप ‘सुरक्षित र प्रभावकारी’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त खोप र रगत जम्ने समस्याबिच सम्बन्ध हुनसक्ने भन्ने त्रासकाबीच १३ ईयू देशहरूले सो खोपमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएपछि ईएमएले अनुसन्धान गरेको थियो । इटली, स्पेन र जर्मनी सहितका केही देशले उक्त खोपको प्रयोगलाई शुक्रवारबाट पुन: सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । स्विडेनले निर्णय लिनका लागि आफूलाई ‘केही दिन’ …
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०८:३४ समाचार
खोटाङ । कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-५ दुर्छिमका खडक भनिने ३४ वर्षीय अजित राईको मृत्यु भएपछि प्रहरीले स्थानीयवासी पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यही चैत २ गते राति स्थानीय बासिन्दाको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका राईको उपचारका लागि लैजाने क्रममा यही चैत ३ गते मृत्यु भएपछि प्रहरीले चार महिला र एक पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । राति घरमा सुतिरहेकी ३४ वर्षीया एक महिलाको कोठामा प्रवेश गरेर अभद्र व्यवहार …
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०८:१३ समाचार
मुगु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर ‘छोरी’ सरह बनाएका मुगुकी ठिल्ले साङमु लामाले अहिले अभाव र तनावका कारण विद्यालय जानै छोडेकी छिन् । ३ वर्षअघि अभिभावकत्व ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ठिल्लेको परिवारलाई जम्मा २० हजार नगद र केही लत्ताकपडा पठाए । तर खर्चको अभावमा र विद्यालय जाँदा एवं गाउँघर पुग्दा सबैले ‘प्रधानमन्त्रीकी छोरी’ भनेर गिल्ला गरिदिँदा तनावमा परेर ठिल्ले विद्यालय जानै छाडेकी हुन् । अभाव र तनावका …
1,274 पृष्ठ मध्येकॊ पृष्ठ नं 30« पहिलॊ...1020«2829303132 » 405060...अन्तिम »